Home Wararka Madaxweynihii hore ee Ghana oo loo soo magacaabay Soomaaliya
Madaxweynihii hore ee Ghana oo loo soo magacaabay Soomaaliya
Mussa Faki Mohammed oo ah Guddoomiyaha Ururka Midowga Africa ayaa waxaa uu Ergaygiisa khaaska ee Somalia u soo magacaabay Madaxweynihii hore ee dalka Ghana, John Dramani Mahama. Ergayga Khaaska ee AU-da ayaa waxa uu Saamileyda Siyaasadda Somalia kala shaqeyn doonaa sidii ay u gaari lahaayeen Heshiis xeer jajab ah oo ay wada oggol yihiin, si Doorashooyin wada-oggol ah loogu qaban lahaa sida ugu dhaqsaha badan.
Waxaa la sheegayaa in Ergayga cusub uu Ciidamada AMISOM ka taageeri doonaa Waajibaadka shaqo iyo ilaalinta Cod-bixinta Doorashooyinka Somalia. John Dramani Mahama oo 62 jir ah ayaa waxaa uu horey u ahaa Madaxweynihii dalka Ghana muddadii u dhexeysay bishii July 24-dii ee sanadkii 2012-kii ilaa bishii January 7-dii ee sanadkii 2017-kii.
Sidoo kale waxa uu soo noqday Madaxweyne ku-xigeenka dalka Ghana muddadii u dhexeysay bishii January ee sanadkii 2009-kii ilaa bishii July ee sanadkii 2012-kii. Sidoo kale waxa uu Xafiiska Madaxweynaha la wareegay bishii July 24-dii, kadib, markii uu geeriyooday Madaxweynihii hore ee dalkaasi, John Atta Mills.
Magacaabista Ergayga Khaaska ee Midowga Afrika ee Arrimaha Somalia waxay ku soo beegantay, iyadoo Heshiis laga gaaray colaadii ka dhacday Muqdiaho, isla markaana ay Ciidamadii Dowladda Federalka ee ka soo horjeeday Muddo kordhintii ay dib ugu laabtaan Xerooyinka ay ku lahaayeen Labada Gobal ee Sh/Hoose iyo Sh/Dhexe.